प्रश्न सोध्न नजान्नेलाई अन्तर्वाता किन दिन्छिन् पूजा ? – Mero Film
प्रश्न सोध्न नजान्नेलाई अन्तर्वाता किन दिन्छिन् पूजा ?
अभिनेत्री पूजा शर्मालाई पत्रकारले सोध्ने एउटै प्रश्नले दिक्क बनाएको रहेछ । घुमी फिरी रुम्झाटार भनेजस्तै पत्रकारले पल शाह, प्रदिप खड्का र आँचल शर्माको भन्दा बाहिरको प्रश्न सोध्न नसकेको पूजाको गुनासो छ । पूजाले पत्रकारहरुलाई राम्रोसँग प्रश्न सोध्न पनि नआउने बताइदिइन् । पत्रकारले सधै एउटै प्रश्न सोध्ने गरेको र आफूलाई दिक्क भएको उनले मुख खुम्च्याउँदै जवाफ दिएकी छिन् ।
पूजाले पत्रकारले प्रश्न सोध्न नजान्ने भनेपनि युटुबमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी इन्टरभ्यू पूजाकै छ । युटुबरहरुले माइक बोकेर आएपछि पूजाले इन्टरभ्यू दिएकी छिन् । अधिकांश इन्टरभ्यूमा पूजालाई सोही प्रश्न नै सोधिएको छ । पूजाले वाक्क मानेकी नै हुन् भने किन इन्टरभ्यू दिइरहेकी छिन् । किन, उनी आफूलाई मन नपर्ने प्रश्न इन्टरभ्यू लिनेलाई पहिले नै नसोध्नुहोस् भन्न सक्दिनन् ।
प्रश्न नै सोध्न नजान्ने भएपछि तिनै पत्रकारलाई पूजा किन बारम्बार इन्टरभ्यू दिन्छिन् ? कलाकारले दिने प्रश्नको जवाफ पनि हरेक इन्टरभ्यूमा उस्तै हुन्छ । यसैले एक दुइवटामा इन्टरभ्यू दिए भै गयो त, किन भएभरका युटुब च्यानलमा पुग्न पर्‍यो र पूजालाई ?
Pooja Sharma's promo of PYL SHOW ONLY ON NEPAL1 TV MORE FUN IN FULL EDITION TOMMORROW AT 9PM
Gepostet von Pasang Yonzon Lama am Samstag, 1. September 2018
२०७५ भदौ १८ गते ९:०० मा प्रकाशित